कस्तो फल हो एभोकार्डो ? कस्ता व्यक्तिका लागि उपयुक्त ? – Sadhaiko Khabar
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०३, २०७८ समय: २०:५७:४९
नेपालको तातो ठाउँमा पाउने फलमध्ये एउटा फल हो एभोकार्डो । नेपालमा यसको प्रयोगको त्यति धेरै देखिँदैन। तर पछिल्लो समय यो फलको उपभोग गर्ने चलन भने बढ्दै गएको पाइन्छ । यो फल पाचनप्रणालीदेखि लिएर डिप्रे’सन र क्या’न्सरका रो’गीलाई समेत फाइदाकर मानिन्छ। यो फलमा विभिन्न २० थरीका भिटामिन तथा खनिज पाइन्छ।
एभोकार्डोले मोटोपन, मधुमेह, मु’टुको रो’ग घटाउन पनि सहयोग गर्छ। यस फल खाँदा स्वास्थ्यलाई निम्न फाइदा हुन्छ। पोषिलो फल: एभोकार्डोमा भिटामिन र खनिज तत्व पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। एभोकार्डौको भित्री र बाहिरी भाग दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा एभोकार्डौमा ६४ क्यालोरी हुन्छ। जसमा ६ ग्राम चिल्लो, ३.४ ग्राम कार्बोहाइडे«ेट, एक ग्रामभन्दा कम चिनी र ३ ग्राम फाइवर हुन्छ।
एभोकार्डोमा भिटामिन ‘सी, ई, के, बी’ पाइन्छ। राइवोप्लाविन, नियासिन, फोलेट, पयान्टोथेनिक एसिड, म्याग्नेसियम र पोटासियम पनि यो फलमा पाइन्छ। बिटाक्यारोटिन र ओमेगा–३ चिल्लो एसिड पनि यसमा पाइन्छ। एभोकार्डो पूर्ण रुपमा स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ।
यसले रगतमा ग्लुकोजको मात्र नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। एउटा एभोकार्डोमा २५ मिलिग्राम चिल्लो हुन्छ। यसलाई बेटा–सिस्टेरोल भनिन्छ। यसमा रहेको चिल्लो पदार्थ स्वस्थवर्धक मानिन्छ। एभोकार्डो नियमित खाएमा रग’तमा भएको कोल’स्ट्रोललाई सन्तुलन राख्न सहयोग पुग्छ।
दृष्टि क्षमता बढाउँछ: एभोकार्डोमा लुटिन र जियाक्जाथिन गरी दुई रसायन पाइन्छ। यी रसायनले आँखाको कोषमा एन्टिअक्सि’डेन्टविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्छन। यी रसायनले आँखाका कोषिकालाई नष्ट हुनबाट बचाउँछन् र अल्टाभाइलेट प्रकाश प्रदान गर्छन्।
क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ: पर्याप्त मात्रामा यो फलको प्रयोगले आन्द्रा, पेट, प्याङ्क्रियाज र पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ भन्ने दाबी गरिएको छ। अनुस’नधानकर्ता कुरामा विश्वास गर्छन् कि यसमा रहेको ‘फोलेट’ तत्वले अनाव’श्यक सेल बढ्न दिंदैन। क्या’न्सर लाग्न नदिन र क्या’न्सर लागिसकेपछि पनि उप’चारमा यो फल सहयोगी मानिन्छ।
केही अनुस’न्धानकर्ताका अनुसार यसमा रहेको फिटोकेमिकलले बढ्न लागेका क्यान्सरका को’षलाई रो’क्छ। गर्भ’पतन रो’क्छ: आमाको दूध खाने र ग’र्भमा रहेका शिशुका लागि फोलेट अनिवार्य पर्छ। एभोकार्डो नियमित से’वन गरेमा पोषणको क’मीले हुने ग’र्भपतन हुँदैन। एमसी गिल विश्वविद्यालयले गरेको अनुस’न्धानअनुसार ३० प्रतिशत ग’र्भपतन गर्भाव’स्थामा हुने फोलेटको क’मीले हुन्छ।
डिप्रे’सनको जो’खिम कम गर्छ: यो फलमा उच्च मात्रामा रहेको फोलेट तत्वले डिपे्रसन हुनबाट बचाउन सक्छ। किनकि फोलेटले होमोसिस्टाइन उत्पादन गरी मस्ति’ष्कमा पठाउँछ। यसले मस्ति’ष्कमा हुने सेरोटोनिनी, डोपामिन र नोरेनिफाइन प्रभा’वित गर्छ।
जसले थकान, निद्रा र मुडलाई निय’न्त्रणमा राख्छ। पाचन प्रक्रियामा सहयोगी: एभोकार्डोमा पर्याप्त मात्रामा फाइवर, क्रिमजस्ता तत्व पाइन्छन्। फाइवरयुक्त खानाले क’ब्जियत हुन दिँदैन र पाचनप्रणाली चुस्त बनाउँछ। पाचन प्रणाली राम्रो हुँदा आन्द्राको क्या’न्सर हुने जो’खिम कम हुन्छ।
शरीरबाट वि’कार हटा’उँछ: एभोकार्डो नियमित से’वन गर्दा प्राकृतिक रुपमै शरीरमा भएको विकार निर्मलीकरण गर्छ। यसको सेवनले शरीरमा रहेको दूषित रसायन दि’सा या पि’सावको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छ।
बाथको उपचार: यसमा पाइने ‘स्याप्नोनिन्स’ ले गठियाबाथको उप’चारको काम गर्छ। यसको नियमित सेव’नले गठियाबाथको कारण हुने दु’खाइ पनि कम गर्छ। महान् भनाइहरु बा’ट ।